Brendon Slotterback waa lataliye sare ee barnaamijka Cimilada & Tamarta Midwest. Doorkan, meelaha diiradda lagu saaray Slotterback waxaa ka mid ah horumarinta iyo hirgelinta istaraatiijiyad barnaamij, iyo u diyaarinta McKnight iyo deeq-hawlgalayaasha kaabayaasha cusub iyo maalgelinta tamarta nadiifka ah ee u qulquli doonta Midwest.
Slotterback waxa uu xirfadiisa ku qaatay ka shaqaynta arrimaha xudunta u ah barnaamijka deeq-bixinta Cimilada Midwest & Tamarta ee McKnight. Shaqadiisu waxay diiradda saartaa taageeridda bulshooyinka maxalliga ah si ay wax uga qabtaan isbeddelka cimilada, horumarinta baabuurta korontada ee Midwest, iyo kicinta korantada korantada, oo ay ku jiraan moodooyinka ganacsiga tamarta iyo dadaallada casriyeynta xadhkaha. Slotterback wuxuu hogaamiyay kulamo taxane ah oo McKnight uu kafaalo qaaday si ay uga qaybgalaan xubnaha bulshada si ay u qiyaasaan korantada Minnesota ee dhaafsiisan hawlgabka ee duuliyihii saldhiga gabowda.
McKnight ka hor, Slotterback waxa uu u ahaa Iskuduwaha Barnaamijka Sustainability ee Magaalada Minneapolis, halkaas oo uu ku horumariyay oo uu ka hirgeliyay mid ka mid ah qorshayaasha waxqabadka cimilada ee ugu horreeya ee degmada. Ka dib, waxa uu ka caawiyay gorgortanka iyo hirgelinta Iskaashiga Tamarta Nadiifinta leh ee Xcel Energy iyo CenterPoint Energy, u diraya xalalka tamarta macaamiisha Minneapolis iyo helitaanka faham qoto dheer oo ku saabsan sharciyeynta iyo deegaanka sharci dejinta ee habka.
Wuxu leeyahay xiriiro xooggan oo ku saabsan qaybaha dadweynaha, gaarka ah iyo deeqda iyo deeqaha iyo in lagu martiqaaday in uu la wadaagto shaqadiisa Wasaaradda Tamarta ee Maraykanka, Carbon Nolol Cities Alliance, Machadka Dhulka Magaalada, iyo C40 Cities. Kaalinta Milwaukee iyo Iowa City, Slotterback wuxuu haystaa BA ee cilmiga siyaasadda ee UW-Eau Claire iyo MA ee qorshaynta magaalooyinka iyo gobolka ee ka socda Jaamacadda Minnesota ee Hubert H. Humphrey School of Public Affairs. Wuxuu yahay xirfadle LEED-aqoonsi ah iyo xubin ka mid ah Machadka Maraykanka ee Qorshayaasha Shahaadada.
By Brendon Slotterback Abriil 2016